Herisetra ara-nofo :: Lehilahy voatondro ho nanolana vehivavy manaraka fitsaboana • AoRaha
Herisetra ara-nofo Lehilahy voatondro ho nanolana vehivavy manaraka fitsaboana
Nosamborin’ny polisy tany Imerintsiatosika, tamin’ ny sabotsy lasa teo, ny lehilahy iray, manodidina ny 25 taona, voatondro ho nano­lana vehivavy iray, 36 taona. Voatazona am-ponja vonjimaika izy, taorian’ny famotorana rehetra. Fantatra, araka ny fanampim-panazavana avy amin’ny mpanao fanadihadiana, fa vehivavy nitsabo tena tao amin’ny hopitaly iray fitsabo­a­na olona marary saina eny Imerintsiatosika ity niharan’ny fanararaotana ara-nofo ity.
Voalaza fa mifankafan­tatra sy efa mpifanerasera ity vehivavy ity sy ilay voatondro ho nanolana azy. Mipetra-drery noho ny fitsaboana ataony eny an-toerana ilay vehivavy. Voalaza fa sady miasa ao amin’ny hopitaly ihany koa izy. Etsy ankilany, miasa ao ihany koa ny vadin’ ilay lehilahy ka tonga mitsena an’io vadiny io foana izy.
«Nisy fotoana, tafaraka samy irery ilay lehilahy sy ity vehivavy manaraka fitsaboana ity. Tamin’izany indrindra no nohararaotin’ilay lehilahy nanaovana ny filan-dratsiny. Notereny nanao firaisana taminy ilay vehivavy», hoy ny tatitra avy amin’ny polisy.
Nitantara tamin’ny mpi­tsabo ny zavatra nahazo azy ilay voaolana. Nampilazaina haingana ny mpitandro ny filaminana. Voalaza fa nitory ilay vehivavy niharan’ny herisetra. Natao ny famotorana ka izao niafara tamin’ny famonjana vonjimaika izao.
Razana teny Anosibe Lehilahy roa hita faty teo an-tsisin-dalana
Fanjonoana farihy maloto Nogadraina ny lehilahy roa naka trondro tetsy Masay
Ambodin’Isotry Dimy lahy nirongo basy nanafika fivarotana
Fiparitahan’ny laza adina :: Voasambotry ny zandary ny talen’ ny Ofisin’ny bakalorea teo aloha